Soo dejisan ArtMoney 8.08 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: ArtMoney
ArtMoney – khiyaaliga guud ee loogu talagalay in lagu saxo xuduudaha cayaaraha kombiyuutarka. Nidaamku wuxuu sawiraa xasuusta xusuusta ama cayaaraha, wuxuu raadiyaa qiyamyada qaarkood sida rasaas, lacag ama nolol iyo soo bandhigyo si loo xusho qiimaha loo baahan yahay si loo xereeyo dhammaan waxyaabaha aan loo baahnayn iyo beddelaan qiimayaashan markaad doorato. ArtMoney waxaa loo isticmaali karaa ulajeedooyin kala duwan oo ka mid ah rasaasta aan dhamaadka lahayn iyo dhimashada aan lahayn, si loo qaboojiyo wakhtiga howlgalka iyo korodhka degdegga ah ee heerka dabeecadda. Barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay algorithms gaar ah oo khiyaanaysa ciyaaraha iyada oo aan qiimaha la arki karo, tusaale ahaan, qaababka garaafka nolosha ama mana. ArtMoney wuxuu ka shaqeeyaa oo keliya hal cayaaraha cayaarta oo si sax ah u beddeli kara qiimaha ciyaaraha internetka iyada oo laga reebayo qaar ka reeban.
Hagaajinta muhiimka ah ee ciyaarta
Taageero loogu talagalay ciyaaraha caanka ah ee caanka ah
Isticmaal ujeedooyin cayaareed kala duwan
Awood u lahaanshaha khiyaamaynta ciyaaraha oo aan qiimo laheyn
Soo dejisan ArtMoney
Faallo ku saabsan ArtMoney
ArtMoney Xirfadaha la xiriira
Mashiinka khiyaanooyinka – software faa’iido leh ayaa loogu talagalay dadka ciyaara ciyaaraha. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku badasho ciyaaraha: heerka, tirada nolosha, lacagta, hubka, iwm.
Caan ah oo ka mid ah ayaa isagana ka emulator ee shabakadda deegaanka. Software wuxuu hubinayaa xiriir aamin ah ciyaartoyda kale oo uu leeyahay qalab badan oo Iyada.
software The si loo go’aamiyo midabka ah ee pixel taas oo dulqabo mouse waxay muujinaysaa in. software soo bandhigayaa midabka ah ee pixel ee ah qaabab caadi yar.
software waxa ay kordhisaa waxqabadka of your computer adigoo dayacanka nidaamka, nadiifinta diiwaanka iyo defragmenting disk adag.
Avidemux – aalad loo habeeyo oo lagu socodsiiyo faylalka fiidiyoowga ah. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u beddelo fiidiyoowga qaabab caan ah waxayna ku siisaa tayo sare oo muuqaal leh.